a - TECHNOMANIAC's - BLOG: 2008
9th Sep Special Event and Me
ပန်းသီးကုမ္မဏီ၏ မနက်ဖြန်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သော အထူးရှယ် ... Music Event ကို ပရိသတ်အများကစောင့်မျှော်နေကြသည်။ အိုင်ပေါ့ အသစ်တွေ ထွက်မည်ဟု ကောလဟလ ထွက်ရုံမက တစ်ချို့ဆိုက်များတွင် ဓါတ်ပုံတွေတောင် ပြန့်နေပါပြီ ။
အိုင်ဖုန်း သတင်းတွေ ထွက်မည် ( ဥပမာ - Firmware 2.1 ) ဟုလည်း ကြားနေရပြီး လူတိုင်းက ဘာလဲဘာလဲ ဖြစ်နေကြ၏။ iTunes 8 အကြောင်းလည်း သတင်းလှန့်ထားတာတွေ့ရသည်။
ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ တစ်လုံးမှ ၀ယ်ဖြစ်ဦးမည် မဟုတ်။ အသစ်ထွက်မည့် ကွန်ပျူတာကို စောင့်မျှော်နေပြီး ရသမျှ ပိုက်ဆံ ကုတ်ကပ်စုနေမိ၏။ မက်ခ်သတင်းကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ သူများအတွက်တော့ မနက်ဖြန်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းပါ။ အောက်တိုဘာလထိ စောင့်ရန်အကြံပေးထားသည်များကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ သစ်ကုလားအုတ်ဖြစ်မှ မက်ခ်ဘွတ်ခ်အသစ်တွေ ထွက်မည်ထင်ပ။
အတန်းထဲတွင် လူအများ၏ အပြစ်တင်ခြင်းကိုလည်း ခံနေရကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုပါသေးသည်။ ကျွန်တော့်၏ မိုက်မဲစွာ မက်ခ်ဘွတ်ခ်ကို သူများပေးလိုက်ကာ ပီစီသုံးနေသည့် အပြစ်ကို ၀ိုင်းရှုတ်ချသူများလည်း ရှိသေးသည်။ သေချာတာ တစ်ခုက ၂နှစ်လောက် Keynote သုံးပြီးလျှင် Powerpoint သုံးရသည်မှာ မချစ်မနှစ်သက်သော ဆေးခါးကြီးကို နှာခေါင်းပိတ်ပြီး မျိုချရသည်နှင့်တူနေပေသည်။
Pages, CSSEdit, Expose, Spotlight တို့မရှိသော အခြေအနေမှာ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ကို ကီးဘုတ်သာသုံးရမည်ဟု ပညတ်ထားသလိုပင်။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ်လအနည်းငယ် ခံစားရဦးမှာပါပဲ။
Posted by Wai Phyo at10:09 PM0comments
iMac refreshed | Boring Yahoo deal | Kindle Kindle
အများခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့မနက် ပန်းသီးစတိုးခဏဒေါင်းသွားပြီးတဲ့ သကာလမှာ iMac အသစ်တွေ ထွက်လာပါပြီ။ ပျင်းစရာကောင်းမှာဆိုးလို့ ကျွန်တော်ဒီမှာ system ကို အသေးစိတ် မရေးတော့ဘူး၊ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တွေ၊ မမ်မိုရီတွေ၊ ဟာ့ဒစ်စ်ဆိုက်တွေ မတော်မတရားတိုးမြှင့်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက် ၄လလောက်တော့ ထပ်ပြီး Refresh မဖြစ်လောက်တော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Design ပိုင်းလည်း ၆လ ၈လ အတွင်းမှာ ထွက်ဖို့မမြင်ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် မက်ခ်ဘွတ်၊ မက်ခ်ဘွတ်ပရိုအသစ်တွေတော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းချိန်းဦးမယ်လို့ ကောလဟာလကြားပါတယ်။ နောက်ဆုံး အိုင်ဖုန်း 3G ကတော့ ဇွန်လ ၉ရက် WWDC Keynote မှာ ကြေငြာမယ်လို့ ပြောနေကြတာ မျက်စိတောင်နောက်စရာပဲ။ ဟိုတလောက ၀ယ်လိုက်တဲ့လူများတော့ အဟဲအဟဲ။ တရီးဂျီရတော့ဝူး။
နောက် ရာဟူးကိစ္စက တော့ နားကိုညီးနေတော့တာပဲ။ သတင်းစာဖတ်မလား၊ အွန်လိုင်းကြည့်မလား၊ ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူး။ တဖြည်းဖြည်း ဇာတ်ရှိန်တက်လာတာ ရှုပ်ယှက်ကိုခက်လာတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အပြီးဖြတ်မယ်လို့ပြောနေတယ်။ ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ -
၁၊ Shareholders တွေကိုအတင်းပိုက်ပိုက်ထိုးပေးပြီး အကုန်အပြီးဝယ်လိုက်မလား။ Hostile Takeover!! =(
၂၊ ယာဟူးဘုတ်ကို လူအကုန်နှင်ထုတ်ပြီး သူတို့လူတွေနှင့် အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလား။
၃၊ ဈေးတိုးပေးပြီး ခေါင်းမာနေတဲ့ လက်ရှိဘုတ်ကို ဆွယ်မယ်။
၄၊ တခါတည်း မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က အပျိုလေးလို ခေါင်းခါ ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ထွက်သွားမယ် ... (အဲ့ခါဆို ယာဟူးစတော့ခ်တွေတော့ လုံးဝကျပြီ၊)
စသည် စသည်နှင့် ပုံပြင်တွေ သိပ်များနေတယ်။ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာ ထပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
Kindle Kindle ဆိုပြီး အမေဇုန်ကလည်း ဒီနေ့ကြုံးဝါးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ (သူက အီးဘွတ်ခ်ဖတ်လို့ရတဲ့ စက်ပစ္စည်းလေးပါ ) လူတွေ စာရွက်မရှိတော့တာကို သတိမထားမိလောက်အောင် ဖြစ်သွားစေရမယ်ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ပရောဒတ်ကို ဂုဏ်ယူနေတာဗျ။ အခု Out of Stocks ဖြစ်သွားလို့ အရမ်းပျော်နေလေရဲ့၊ ရေလည်ရောင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီး။ စင်္ကာပူမှာ သိပ်မတွင်ကျယ်သေးလို့ မတွေ့ရသေးဘူး။ ပြဿနာက စလုံးတွေစာဖတ်အားကလည်း ရထားပေါ်မှာဆိုရင် ကျိုးတိုကျဲတဲပဲတွေ့ရတာဗျ။ အင်း.. သံသယတော့ရှိစရာပဲ။ နီးနီးနားနားမှာ သုံးတာတွေ့ရင် ကပ်ရှိုးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်၊ သူများတွေပြောသလို တကယ်ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ။
အခုတော့ အိပ်ချိန်တန်လို့ လစ်ဦးမယ်ဗျိုး။
Posted by Wai Phyo at1:36 AM0comments
Skimming iPhone SDK
သတင်းအထွေအထူးမရှိသော ကာလဖြစ်၍ ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ အိုင်ဖုန်း SDK ပဲ ထိုင်ဖတ်နေပါတယ်။ ပန်းသီးရဲ့ desktop အတန်းအစား operating system ၁ခုလုံးကို မိုဘိုင်းထဲထည့်ပေးလိုက်နိုင်တာ အင်ဂျင်နီယာတွေကို ချီူးကျူးပါတယ်။ လွယ်တယ်မပြောပါနှင့် Windows Mobile6ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲ မဟုတ်ပလား။ =D
အဲ့ဒီ iPhone OS ကို ထုံးစံအတိုင်း အလွှာတွေ အများကြီးနှင့်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ များတယ်လို့ပြောပေမယ့် တကယ်တမ်း အဓိကပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင် လေးခုပဲရှိပါတယ်။ အောက်ဆုံးက Core OS ကြီးပါ။ Thread, Kernal, IO, File System, BSD Sockets တွေကိုထိန်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။ သူ့အပေါ်မှာ Core Services တွေရှိပါတယ်။ SQLite, XML, DNS Hosts တွေကို resolve လုပ်ချင်သလား၊ Security ကိစိပိစိတွေကို ထိန်းချုပ်ချင်သလား၊ ဒီနေရာမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်ဂွင်းသမားတွေကတော့ Shell တွေလို့ခေါ်ချင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့အပေါ်မှာကတော့ လှပတဲ့ Media လေယာရှိပါတယ်။ ဒီကောင်က ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတဲ့ အလှအပအနုအရွ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ခြယ်မှုန်းတဲ့နေရာပေါ့။ OpenGL, OpenAL စတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း framework တွေရှိတဲ့အပြင် open source နည်းပညာတွေ သုံးထားတဲ့အတွက် သင်အဲ့ဒီ Media Layer အတွက်ရေးပြီးတဲ့ ကုဒ်တွေကို တခြား open စနစ်တွေ support လုပ်တဲ့ platform တွေမှာလည်း ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး အပေါ်ဆုံးမှာကတော့ Cocoa Touch ဆိုတာရှိပါတယ်။ .. ဒါနှင့် Cocoa ဆိုတာ ပန်းသီး OS X ရဲ့ ကုဒ်ရေးတဲ့ Framework ကိုခေါ်တာပါ။ ဒီအိုင်ဖုန်းအတွက်ကတော့ Touch လို့ရလို့ Cocoa Touch ပေါ့။ ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ Application တွေရေးရင် အဲ့ဒီလေယာနှင့်ပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ သူ့မှာရှိသမျှ function call တွေ အကုန်နီးပါး ထည့်ပေးထားလို့ Camera, Accelormeter, Vibration စတဲ့ hardware feature တွေတောင် ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ ဒီလေယာက အသက်လို့ခေါ်ရပါမယ်။ အလွယ်ဆုံးနှင့် ပရိုဂရမ်ရေးဖို့ အမြန်ဆုံးပါ။ ... အဲ့နောက်ဆုံး စိတ်မကျေနပ်လို့ ဟိုး Core OS ကိုပါ ထိန်းချင်တယ်ဆိုလည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားပေးပါတယ်။ လုပ်ချင်သလိုသာ လုပ်ပါတဲ့။
အားလုံးကောင်းနေပေမယ့် အဓိက အတားအဆီးက Objective-C ပါ။ ကျွန်တော် C မိသားစုဝင်တွေကို သင်ယူခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီလဒကတော့ မပါပါဘူး။ တော်ရုံ Developer က မအားတဲ့ကြားကနေ ဘာသာစကား နောက်တစ်ခုထပ်သင်ဖို့ဆိုတာ အလုပ်အင်မတန်ရှုပ်ပါတယ်။ Sun က Java ကို native ရေးပေးလိုက်ရင်တော့ ဒီကိစ္စတွေက တစ်မျိုးတမည်ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ J2ME မှာလုပ်သလို .. ဥပမာ .. ဂိမ်း package တွေဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီက keypad တွေကို ထိန်းတဲ့ methods တွေဟာ အိုင်ဖုန်းမှာ သုံးမရပါဘူး။ သူ့မှာ ခလုတ်မှမရှိပဲ။ အဟီး CLDC (connected limited device profile) 1.1 လက်ရှိကို ... 1.5 လောက်ထိ မြှင့်လိုက်မလားပဲ။ =P ဒါမှမဟုတ် .. MIDP 2.0 ကို ... 3.0 လောက်ထပ်တင်ပြီး သီးသန့်ရေးရမယ်ထင်တယ်။ ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ Java ပဲ လုပ်ထားကွဆိုပြီး ဟစ်နေရမလိုပဲ။ =D
လောလောဆယ်တော့ ဆက်ဖတ်ဆဲပဲဗျာ။ အဓိကက ကီးဘုတ်ပဲ မဟုတ်လား။ အမြန်ရေးရမယ်လေ။ Tsk tsk tsk.
Posted by Wai Phyo at10:34 PM0comments
Bootcamp 2.1 Problems - Bad Bad!
အသစ်ထွက်တဲ့ Bootcamp 2.1 ကို အင်စတောလုပ်ရာမှာ လူတော်တော်များများ အခက်တွေ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဟောဒီ ပန်းသီး thread ကို ဥပမာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှ သွင်းမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Error ၂ မျိုးတက်ကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်။ ၁ခုက Preparing Install ပြီးရင် ပျောက်သွားတာပါ။ နောက်၁ခုက Cannot apply transformations ဆိုပြီး ဒရိုင်ဘာတွေ အပ်ပဒိတ်လုပ်မရတဲ့အခြေအနေပါ။ အဲ့တာ အွန်လိုင်းမှာအတော်ရှာပြီး ကြိုးစားကြည့်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ နည်းလမ်းအဖုံဖုံကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်နှင့် အဆင်ပြေမဲ့နည်းကို စမ်းကြည့်ကြပါ။ သင့်မှာလည်း အလားတူ ပြဿနာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။
၁။ MacFixIt ကပေးတဲ့ နည်း
၂။ Language Pack ကို အင်္ဂလိပ်ထားပြီး သွင်းကြည့်ပါတဲ့။
၃။ Windows Installer 3.1 v2 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး အဲ့ဒါကို အရင်သွင်းပြီးမှ ထပ်သွင်းကြည့်ပါတဲ့။
၄။ နောက်ဆုံးမရရင် OSX Leopard Restore disc နှင့် Bootcamp 2.0 ကို ပြန်ထုတ်ပြီး 2.0 ထပ်/ပြန် သွင်းပါ။ ပြီးရင် 2.1 ကိုသွင်းပါ။ အိုကေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အပေါ်သုံးချက်လုံး အဆင်မပြေသေးဘူး။ နောက်ဆုံးအချက်ကိုလုပ်ဖို့ ခွေရှာမတွေ့သေးလို့ ဘာမှလုပ်မရဘူး။ ပြောကြတာတော့ အိုကေပါတယ်ဆိုပဲ။ နောက်ပြီးပြဿနာက ဘယ်ကစလဲဆိုရင် Apple Software Update (Vista) မှာ BC2.1 update ပေါ်လာတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် Cancel လုပ်လိုက်ပြီး နောက်တော့မှ အွန်လိုင်းပေါ်က Standalone exe ပြန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသွင်းတာ သွင်းမရတော့တာ။ သူ့ဘာသာ အော်တိုငုတ်တုတ် သွင်းလိုက်ရင်ပြီးရောဗျာ။ =( [အဲ့တာလည်း တစ်ချို့ပြောတော့ မရဘူးဆိုပဲ]
Posted by Wai Phyo at6:05 PM0comments
Traditionally Launch Apps using Win+R
Application တွေ၊ ပရိုဂရမ်တွေ၊ ဖိုင်တွေကို အရင်တုံးက ဖွင့်ဖို့အရမ်းခက်တယ်မဟုတ်လား။ =D Start Menu ကို နှိပ်၊ တစ်ခုချင်းရှာ ဘာညာကွာစိနှင့် အလုပ်သိပ်ရှုပ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ Launcher ဆိုတာတွေကို သုံးခဲ့ကြတယ်လေ။ Launchy, Quicksilver စတဲ့ ပရိုဂရမ် launcher တွေဟာ အရမ်းအဆင့်မြင့်လာကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခုဟော့နေတဲ့ Enso ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းသလဲ။ သင်ဂူဂယ်မြေပုံရှာမလား၊ alarm ပေးမလား၊ scientific တွက်ချက်မှုတွေလုပ်မလား၊ စသည်စသည်နှင့် အရမ်းအသုံးဝင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးက မမ်မိုရီတုတ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါကြောင့် .... ကျွန်တော်ကတော့ နည်းဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ StartMenu -> Run ကိုပဲကြိုက်တယ်။ Win + R နှိပ်လိုက်ရင် box လေးပေါ်လာ သင်ဖွင့်ချင်တဲ့ ပရိုဂရမ်ကို နာမည်ရိုက်ထည့် .. ဗြုန်းဆိုတက်လာ။ ပြီးရော။ ဥပမာ - gtalk ဆိုရင် .. Win+R နှိပ်၊ gtalk ရိုက်လိုက်ရုံပဲ။ Google Talk ကြီးပွင့်လာရော။ သဟာမျိုးရိုက်နိုင်ဖို့ကို Registry မှာ နည်းနည်းပြင်ထားရုံပါပဲ။ Firefox လို ဆော့ဖ်ဝဲက သွင်းလိုက်ရင် အော်တိုရေးပေးပြီးသားမို့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး၊ Win+R နှိပ် firefox လို့ ရိုက်လို့ရတယ်။ အခုဆရာတို့ favourite .. QQQ ချတ် လိုဟာမျိုးတွေကတော့ မရဘူး။ Registry ပြင်ရေးရမယ်။ အဲ့လို နှစ်သက်ရာပရိုဂရမ်ကို Win+R သုံးဖို့အတွက် .. follow these steps ပါ။ -->
#1 - Open Registry Editor! Press Windows Key + R, then type, regedit.
#2 - When Registry Editor opens, expand "HKEY_LOCAL_MACHINE", expand "SOFTWARE", then find "Microsoft" and expand.
#3 - Then, find "Windows" and expand. You will see "CurrentVersion". ... then, expand "App Paths" again.
#4 - Here you can see tons of .exes in the list. Your application need to be one of the list!
#5 - So, right click on "App Paths" --> New --> Key.
#6 - Change the key name to the one you're gonna type in "Run command box" .. if u want to type only gtalk .. so put it "gtalk.exe". Make sure you put ".exe"!
#7 - Alright, now, just click on "(Default)" and "Modify".
#8 - Then, type in the path of the application you wish to open. Mine is Gtalk, which lies under ProgramFiles\_GoogleTalk.!
Click OK. Close Registry Editor. Now try launching your favourite application from "Run box". Press Win+R, type "gtalk", click OK. That application should launch properly =D
[Should there are any discrepancies, you might sound off in the comments! Thx fellas. ]
Posted by Wai Phyo at6:18 PM0comments
ပျင်းဖို့အလွန်ကောင်းသည်။ နွေရာသီ ဒီအချိန်ဆိုလျှင် ရန်ကုန်က ကလေးများ အနားယူနေကြလောက်ပြီ။ တချို့လည်း ကိုရင်ဝတ်၊ ကျူရှင်တက်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြပေဦးမည်။ ကျွန်တော့်ညီ ဒီနှစ်ဆယ်တန်းဖြေပြီးသဖြင့် မေးလာသော မေးခွန်းများကို ဖြေရင်း ဒီစာကိုရေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခုခေတ်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေက ပိုများလာကြသည်။ ကျောင်းပြီးတာနှင့် အိုလယ်ဗယ်၊ အေလယ်ဗယ်တွေ အပြိုင်တက်နေတာကို တွေ့ရသည်။ ရှိရှိသမျှ standardized tests တွေကို ဖြေမယ်ဆိုပြီး ကြုံးဝါးထားသော လူများလည်း မနည်းပေ။ ထိုအထဲမှာမှ ပြဿနာတစ်ချို့ကို ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာ အခုပိုဆိုးလာသဖြင့် ကြုံတုံး ဆရာလုပ်ခွင့်ပြုပါရန် ပဏာမ ခွင့်တောင်းပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီအချက်များကို နားထောင်ကာ ၃မိနစ်မျှ စဉ်းစားပေးစေလိုပါသည်။
၁။ ကျောင်းသားတိုင်းသည် နိုင်ငံရပ်ခြားကို သွားချင်ကြသူမဟုတ်၊ သူများသွားတိုင်း လိုက်မသွားစေလိုပါ။ ဒီအချက်အရမ်းအရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာ ဖက်ရှင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကလေးကစားစရာမဟုတ်ပါ။ Risk တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပြောပြောနေတဲ့ Right Match ဆိုသည်မှာ ဒီအရာကို ဆိုလိုသည်ဟု ပြောချင်ပါသည်။ လူသည် သူအသင့်တော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်နေရာတွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ကိုထုတ်ကာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော့် ဘော်ဒါများထဲတွင် အောင်မြင်နေကြသူများမနည်းပင်။ ဒီကိစ္စပြောရခြင်းမှာ မိဘကို ဒုက္ခပေးကာ နိုင်ငံခြားထွက်လာသော ကျောင်းသားများသည် စိတ်မပါတပါနှင့် ပျက်စီးသွားသဖြင့် အားလုံး အဆိုးဖက်ကိုသာ ဦးတည်ခဲ့ကြသည်ကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရသည်။ စိတ်တကယ်ပါမှ တကယ်လုပ်သင့်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်။ တစ်ဖက်ကကြည့်လျှင် မိဘများအတင်း ထွက်ခိုင်းရင်လည်း ပြန်လည်ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးသင့်ပေသည်။
၂။ စာမေးပွဲများကို စွတ်တရွတ်မဖြေသင့်ပါ။ သင်ဘယ်နိုင်ငံတွင် ပညာဆက်သင်ချင်လဲဆိုသည်ကို ပထမအွန်လိုင်းတွင်လေ့လာကြည့်သင့်ပါသည်။ အေးဂျင့်များသည် Consulting ကောင်းသော်လည်း ပါးပါးလှီးတတ်သဖြင့် ကျွန်တော့်တုံးက ဆိုလျှင် ကွန်ပျူတာနှင့် အင်တာနက်သာ အဓိကအားကိုးရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တချို့များ စိတ်မကောင်းစရာဖြင့် ပေါင်နှံလိုက်ရသည်မှာ ကလေးက ဟိုဖက်ကမ်းတောင်မရောက်လိုက်ရ။ အခုနေပြန်ပြောကြရင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ရီမောရသော အဖြစ်များပင်။ ကိုယ်တွေလည်း ခံခဲ့ရသူတွေပဲလေ။ အဲ့ခေတ်က အင်တာနက် သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောကာလတွင်ပင် တော်တော်လေး ထက်သော ကျောင်းသားများလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ (မိဘ မချမ်းသာပါ။) ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အင်တာနက်ကြည့်ပြီး ဘယ်ကျောင်းကောင်းလဲ ရွေးချယ်နေသည်ကို တော်လှပြီဟု လေထဲမြှောက်နေခိုက်တွင် သူတို့သည် ကမ္ဘာလုံးကို ဟိုဖက်ဒီဖက်လှည့်ပြီး ကန်၊စလုံး၊မလေး၊ထိုင်း ကတော့ဖြင့် ပိုက်ဆံချေးငွေဖြင့်တက်လို့ရသည်။ ဘိလပ်၊အော်ဇီ၊အန်ဇီ ကတော့ဖြင့် ကျောင်းလွယ်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဝင်ရခက်သည်၊ လူမျိုးရေးဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လိုခွဲခြားပြီး ဈေးဘယ်လောက်ရှိသည်ကို အမ်မယ်.. ကွင်းကွင်းကြီး သိနေတာဗျာ။ ပြောချင်သည်ကတော့ များများဖတ်ပါ။ ဒီနေရာတွင်လည်း ကိုယ်နှင့်ကီးကိုက်မဲ့ အရာကိုစဉ်းစားကြစေလိုပါသည်။
၃။ အပေါ်ကအချက်ကို ပြောရင်းနှင့် စာမေးပွဲကိစ္စကိုတောင်ကျော်သွားပြီ။ သူများ အက်စ်အေတီလုပ်တိုင်း လိုက်လုပ်စရာမလိုပါ။ မှတ်သားထားဖူးသလောက် အိုလယ်ဗယ်သည် ဘိလပ်သွားချင်သူများအတွက် လိုအပ်သော်လည်း တခြားကျောင်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်းကို ရှယ်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကိုယ်ကဆယ်တန်း အမှတ်ကောင်းနေရင် ဘာမှကြောက်စရာမလို။ အချိန်ကုန်ခံပြီး နှစ်ခါထပ်မဲ့ အလုပ်တွေသည် သင့်ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးသာ ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကတော့ အရေးကြီးပါသည်။ တိုဘဲဖယ်ဖယ် .. အိုင်ပဲယက်ယက် ကြိုက်တဲ့ဟာသာ လုပ်ထား စကားမပြောတတ်ရင် နားမလည်ရင် ဘာမှလုပ်မရပါဘူး။ တိုင်းပြည်၊ region ကိုရွေးပါ။ ငွေနှင့်အချိန် အလကားကုန်မဲ့အတန်းတွေ မတက်ပါနှင့်။ ကိုယ်နှင့်သင့်တော်တဲ့ အတန်းတွေသာ တက်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး တစ်ချက်အွန်လိုင်းတွင်လေ့လာပြီး ကျော်လွှားဖို့ စဉ်းစားပါ။ SAT လုပ်မရလို့၊ ACT ပြောင်းလုပ်လိုက်ချင်းသည် strategic move ၁ခုလိုပါပဲ။ တစ်ခုမအိုကေရင် ၃နှစ်လောက်လဲ ဖိမလုပ်နေပါနှင့် ဆရာတို့။ ကိုယ်အားသန်သော စာမေးပွဲကို ကောင်းကောင်းမြန်မြန် ဖြေနိုင်မှသာ သင်တက်ချင်သော ကျောင်းကို ချက်ကောင်းခွပ်ပြီး မြန်မြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ နောက် ကိုယ်တစ်သက်လုံး လုပ်စားမဲ့အရာကို လည်း မမေ့ပါနှင့်။ ကိုယ့် profession ကို ဘယ်တော့မှ လွယ်လွယ်နှင့် အပျောက်မခံသင့်ပေ။ ကျောင်းရတိုင်းထွက်လိုက်ပြီး အဆင်မပြေရင် သင်နှင့် သင့်မိသားစုတစ်ခုလုံး စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် မိဘနှင့် အတိုက်အခံပြောခဲ့ရဖူးသည်။ ကိုယ်က ကွန်ပျူတာစိတ်ဝင်စားသည်။ နောက်တစ်ယောက်တည်းအေးအေးနေပြီး တကိုယ်ရေတကာယ၊ ကမ္ဘာပတ်ခြေရှည်ကာ လိုက်ပြီးပညာသင်ကျက်စား ( ရပင့်ကို အထူးသတိပြု ) ရသည်ကို သဘောကျသည်။ လောင်းရိပ်အောက်တွင်နေရသည်ထက် ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်လုပ်ပြီး Risks ယူရသည်ကို ပိုကြိုက်သဖြင့် အိမ်က ပေးသော Option ကို ကြောက်အားလန့်အား ရုန်းကန်ငြင်း ဆွေးနွေးကာ၊ ဒီမှာစာလာဖတ်သည်။ အဲ့တော့ ကိုယ့်ကို Suit ဖြစ်သော အလုပ်လုပ်ရသဖြင့် ဘယ်တော့မှ စိတ်မညစ် ခိုလိုမညည်းနေတော့ပေ။ မယုံရင် စမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်က ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေဘဲပြောတာပါ။ အားလုံးအိုကေပြီဆိုရင် ကျောင်းတွေဘာတွေလျှောက်ပေါ့။ အေးဂျင့်တွေနှင့် မလုပ်ချင်ဘူး၊ အလုပ်မဖြစ်ဘူးထင်ရင်လည်း ၀ဗ်ဆိုက်များတွင်တစ်ချက်ကြည့်ပါ။ တပြားမှမကုန်ဘဲ အလကားလည်း လျှောက်လို့ရပါတယ်။ deadlines တွေဟာလည်း အရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါတွေက တကဏ္ဍတွေပါ။ အကုန်လုံးပြောဖို့ဆိုရင် အေးဂျင့်တွေနှင့် ရန်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဟီး။ အီးမေးပို့ပြီး မေးချင်ရင် သန့်ဇင်ဦးကိုမေးပါ။ (သူကသဟာမျိုးတွေ ပိုကျွမ်း xD )။
အမ်း.ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ညီကို သူလုပ်ချင်တဲ့ဟာသာ တက်ပလေ့စေလို့။ နံပါတ်၁ အချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပြီးမှ တငိုငိုတရီရီနှင့် ဟိုရမ်းဒီရမ်း ယစ်မူးပျော်ပါးနေလျှင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းများ၊ မိဘဆွေမျိုးများလည်း စိတ်ဆင်းရဲရပါမယ်။ ကိုယ်နေချင်သော နေရာတွင်လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံးတွေ လုပ်နေခြင်းကို ဘယ်သူမှ တားနိုင်မှာမဟုတ်တာ အမှန်ပါ။
Posted by Wai Phyo at5:05 PM0comments
Bye 2008 Thingyan
သိကြားမင်းရေ ပြန်ပါတော၊့ ၁၂နာရီတွင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် check out လုပ်သွားပါ ဟုပြောရမလိုပင်။ ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ပြည့်တွင် အကြတ်နေ့ ၂ခါထပ်သော အတာပွဲကို ၃ခါ(၈၊၁၂၊၁၆) သာကြုံခဲ့ရသည်။ အခုတော့ စင်္ကာပူပိတောက်နံ့နှင့်သာ ရောယှက်နေရပြီ။
ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သင်္ကြန်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဇာတ်မသိမ်းနိုင်ခဲ့ဟု ပြောလျှင် ယုံမှာမဟုတ်။ ၈နှစ်သားက ရေပူဖောင်းတွေ ပုံးအပြည့် ဆော့ခဲ့ဖူးသည်။ တွေ့သမျှ ခွေးပါမကျန်လိုက်ပေါက်သဖြင့် အလွန် သောက်မြင်ကပ်စရာကောင်းသော ကလေး၁ယောက်ဟု ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ သမုတ်ကြသည်။ ကြမ္မာတစ်ပတ်လည် စတမ်းဆိုသလို နောက်ဆုံးအတက်နေ့တွင် ဘာမဟုတ်သော ကြောင်တစ်ကောင်ကို ရေပူဖောင်းဖြင့် လိုက်ပေါက်ရာမှ ဆိုက်ကားအတိုက်ခံခဲ့ရလေသည်။ နောက်နှစ်တွေမှစပြီး ရေပူဖောင်းမသုံးရတော့ ဆိုသဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ နှမြောတသသ စုတ်တသပ်သပ်ဖြင့်။
ကျွန်တော် ၁၀နှစ်သားက ဖြစ်သည်။ အဲ့တုံးက မိုင်လိုပုံးဟု ခေါ်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးမှာ လက်စွဲတော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လွယ်အိပ် တစ်လုံးတွင်ထည့်ကာ လမ်းတကာလှည့် ပြွတ်တပ်လျှောက်သွားပြီး ၃ရက်လုံး ပျော်ပြီး နောက်ဆုံးနေ့တွင် လမ်းမှာလာနေသော သင်္ကြန်ကားကို အပြေးအလွှားလိုက်အပက် ခြေချော်ကာ မြောင်းထဲသို့ ဒိုင်ဗင်ထိုးသွားလေသည်။ မေးကွဲကာ ထုံနေသဖြင့် အထုံသင်္ကြန် (တရုတ်ကြီးနှင့်မမှားစေလိုပါ) ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ရသည်။
နောက် ၁၂နှစ်ကျတော့ လူလည်းအတော်အတန် အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ခွက်စောင်းခွက်လတ် အားပါးတရအကုန် ထုတ်သုံးကာကဲလေသည်။ ပြဿနာက ယခင်က ပြွတ်တလုံးနှင့်သာ အားသန်သော ကျွန်တော့်မှာ အဲ့ဒီနို့ဆီခွက်တွေကို သိပ်မကိုင်တတ်၊ အိမ်က အဖေ ရေနွေးသောက်တဲ့ ကိုင်းခွက်ကြီးနှင့်သာ ဆော်လေသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ နောက်ဆုံးနေ့တွင်ပဲ ရေပက်ခံကားတစ်စီးအလာတွင် ခွက်နှင့်အားပါးတရ လွှဲလိုက်သည်မှာ ဖုန်း ခွပ် အား .. ဆိုသော အသံနက်ကြီးသာ ထွက်လာသည်။ ကြည့်လိုက်တော့ လူနှစ်ယောက်မျက်နှာတွေ အုပ်လို့၊ ရုပ်တည်နှင့် ဘာဖြစ်သလဲသွားမေးတော့ အဲ့ကလူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ခွက်ကြီးထုတ်ပေးသည်။ မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲတဲ့။ အဟီးလို့၊ ပြီးတော့ဆက်မေးသည်။
ဘာလို့ဟိုတစ်ယောက်ကရောမျက်နှာကြီးအုပ်ထားသနည်းဟု။ သိလိုက်ရတာကတော့ ကျွန်တော် ခွက်တစ်လုံးနှင့် ငှက်နှစ်ကောင်အုပ်လိုက်ခြင်းပင်။ အထိခံရသောလူက ကြောက်အားလန့်အား ကမူးရှုးထိုးဖြင့် ဘေးလူကို ယောင်ပြီး လက်သီးစာကျွေးလိုက်တာဆိုပဲ။ အဟဲအဟဲနှင့် သကာပေါ် Mayonnese လောင်းသောမျက်နှာဖြင့် ခွက်ကိုယူကာ ခြေကုန်သုတ်ပြေးတော့လေသည်။
နောက်နှစ်တွင်လည်း ဆိုးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များရှိခဲ့သေးသည်။ ကောင်မလေးတွေနောက်လိုက်ရင်း ကားပေါ်ကကျကျန်ခဲ့သည်၊ ကလေးကိုရေပုံးနှင့် ပက်သဖြင့် ရေနှစ်သတ်ပါသည်ဆိုပြီး လိုက်ရိုက်သဖြင့်ပြေးခဲ့ရသည်။ ... ဒီလိုနှင့် ဝေးဝေးဝေး။
သုံးနှစ်ရှိခဲ့ပြီ ကျွန်တော်သင်္ကြန်မနေတာ၊ ပိုပြီး Hot လာတာကောင်းပေမဲ့ ယပလက် သင်္ကြန်လို လူတွေခဏခဏသေမယ်ဆိုရင်တော့ မဟော့ တာပဲကောင်းလေမလား။ American Pie က ကော်လိပ်ပါတီတွေလို မဏ္ဍပ်တွေနောက်မှာ ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာကလည်း သိပ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်၊ အတုခိုးသော်လည်း မမှီမကမ်းခိုးသဖြင့် ဒုက္ခရောက်သွားသော သူငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပင်။ အပျော်ကိုတောင် နဖားကြိုးတပ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို စကားလုံးတွေနှင့် bombard မဲ့ လူတွေရှိနေတော့လည်း ဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်ဆရာ။
(မာတလိ, u too).
Posted by Wai Phyo at12:09 PM0comments
Leaks Leaks Leaks (MS Stuff)
အင်္ဂလိပ်လို ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော့်ကို လာရစ်နေမဆိုးလို့။ (အဟီး) မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ စလုံးကိုလာတော့မယ်လို့ အတွင်းထဲက မိတင်၁ခုကနေ ကြားသိထားရပါတယ်။
Channel 8 ကုို သိကြလားမသိဘူး။ ကျောင်းသားတွေအတွက် လုပ်ပေးထားတဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ပေါ်တယ် လေ။ တခြားချန်နယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျောင်းသားတွေ အတွက် အဓိကကျတာက ချန်နယ် ၈ ပါ။ အဲ့ဒီမှာ ပရိုဂရမ်တော်တော်များများရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက dreamspark ပါ။ တခြားတိုင်းပြည်တွေ တော်တော်များများမှာ အခု VS08 နှင့်၊ သူနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ဆာဗာတွေ development tools တွေကို အလကားပေးတဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့။ စလုံးမှာ မလာသေးလို့ ကျွန်တော်တောင် တစ်ခါ ရီကွက်စ်ထ် လုပ်သေးတယ်။ အခု အထဲ သတင်းအရ မနက်ဖြန်မှာ ရှိသမျှ ဒီကကျောင်းတွေက ကျောင်းအုပ်တွေ၊ ဆရာတွေကို ခေါ်ပြီးပြမယ်။ အဲ့ဒီပရိုဂရမ်ကိုစမယ်လို့ ကြားပါတယ်။ စလုံးကကျောင်းသားတွေအတွက် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ဈေးကြီးပေးမ၀ယ်ရတော့တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပေါ့ဗျာ။
နောက် students2business ကိုလည်း စမယ် ဆိုပါတယ်။ ဒီကောင်ကတော့ ဒီအပတ်လား နောက်တစ်ပတ်လားမသိဘူး။ အခုတော့ သူတို့ရဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ MSP တွေကို ထရိန်နင်ပြန်ပေးနေတယ်ပြောတယ်။ အဲ့ဒီ အစီအစဉ်ကလည်း စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေ အားလုံး အသေးစိတ်သိချင်ရင် Channel 8 MSDN ကို သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် Mix-it-up event သူတို့ဌာနချုပ်မှာ လုပ်လို့ မောင်သန့်ဇင်နှင့်အတူ သွားခဲ့သေးတယ်။ အိပ်ငိုက်တာနှင့် ခဏပဲနားထောင်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အဲ့က ဒီဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲက ကျွန်တော်တို့ကို မျက်မှန်းတန်းပြီး သိနေတော့ ပြုံးပြတယ်။ အစောကြီးထပြန်တော့ အတော်တော့ စိတ်ထိခိုက်သွားမှာပဲ.. အဟိ။ အကြောင်းအရာတွေကတော့ Linq တွေ အကြောင်းပါတယ်ဗျာ။ နောက်များမှ ရေးဦးမယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်များ ဂုဏ်ယူနေတာလဲဆိုတာ မျက်နှာကြီးကိုဖြီးလို့။ ..... tsk tsk tsk ... =P
Posted by Wai Phyo at11:19 PM0comments
(this is not April fool, seriously!)
၃၂ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဒီပန်းသီးကုမ္ဗဏီဟာ သူ့တစ်သက်မှာ ခဏခဏကျရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတဲ့ User Interface ဆိုတာကို Xerox ဆီက နည်းယူပြီး မထုတ်လုပ်မဖြန့်ခဲ့ရင် မည်းမည်းစကရင်သာ မြင်ရတဲ့ QDOS, DOS, Altair စတာတွေနှင့် အချိန်အကြာကြီး လုံးပန်းနေခဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ ကနဦးကောင်းခဲ့သော်လည်း ပန်းသီးဟာ IBM ကို အာဟာရတိုက်ကျွေးမဲ့ ၀င်းဒိုးဟု နောင်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမဲ့ GUI, OS architecture တွေကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဆီ ရောင်းစားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ရွဲသွားလိုက်တာ ၂၀၀၀မှာ စတိဗ်ဂျော့ပြန်မလာခင်အထိပေါ့။
အခုဆိုရင်တော့ အိုင်ပေါ့၊အိုင်ဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဆေးဝါးသိပ္ဗံ၊ အာကသသိပ္ဗံ၊ အားကစား၊ မော်တော်ကား စတဲ့နေရာတွေ အများကြီးမှာ Influence ဖြစ်တဲ့ Leader ၁ခု ပြန်ဖြစ်လာခဲ့လို့နေပါပြီ။
မကြိုက်တဲ့လူတွေက မကြိုက်ပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့ပြန်လာနေတဲ့ နှုန်းထားက ချီးကျူးစရာပါ။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့် စီးပွားရေးဌာနတွေမှာ လွှမ်းမိုးထားပုံခြင်း မယှဉ်နိုင်ပေမဲ့ .. တစ်ကိုယ်ရေသုံး၊ မိသားစုသုံး၊ အိမ်သုံး ကျောင်းသုံး Gadget တွေ၊ ပီစီ တွေမှာတော့ ပန်းသီးက ပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးစပြုနေပါပြီ။
ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ကောင်းတာတွေသာ ယူလာမှာဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
အောက်မှာ လုိုဂိုတစ်ချို့ကို ၀ီကီပီဒီယားမှ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
1976 April 1st မှာ စတိဗ်ဂျော့ နှင့် စတိဗ်ဝေါ့ဇ်နစ်ခ် တို့ စတင်ခဲ့ပုံ၊ နယူတန် ပန်းသီး မှန်သွားတဲ့ ပုံဆိုပါတော့
ဒုတိယပုံက တွေ့တဲ့အတိုင်း ကာလာရောင်စုံနှင့် ဟိုဖက်တစ်ခြမ်းက စတိဗ်ဂျော့နှင့် ဘီလ်ဂိတ်ဘယ်သူလုကိုက်သွားလဲမသိ။
တတိယပုံက တော့ ပြောင်ပြောင် လက်လက် ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ ရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။
Enjoy .. we wish them march on doing good stuff..!
Posted by Wai Phyo at12:46 AM0comments
Diminishing moments (For kids)
(ပြက္ခဒိန်၏ လ၁လ၊ '97 , '98 လား မမှတ်မိတော့သောကာလ)
ကျွန်တော်တို့ လမ်းပေါ်မှာ ဘောလုံးကန်နေ၏။ လမ်းအသစ်ကြီးခင်းပြီးသွားသဖြင့် အားရပါးရ ကန်နေခဲ့ကြချိန်ဖြစ်သည်။ .... ပီပီ .. ဘူဘူ .. " xxx လမ်းအတွင်းနေထိုင်ကြသူများ အားလုံးခင်ဗျား.. ဒီလမ်းသစ်ကြီးတွင် ကလေးသူငယ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် အရှိန်တားခုံးများ Install လာလုပ်ပါမည်တဲ့။ " ..
ဒင်းတို့ကမှ တကယ့်အန္တရာယ်ဟု အားလုံးတပြိုင်တည်း ရေရွတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရူပဗေဒ အခြေခံကို အပြည့်အ၀အသုံးချကာ ခုံးတွေ့တိုင်း ကျော်ကျော်ပြီးကန်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လာမတားနှင့် မရလေဘူး..။
ဂျင်ပေါက်ကြသည်။ အ၀ိုင်းဂျင်ကော အပြင်ဂျင်ကော စို့ ဆိုလား စုပ်ဆိုလား မသိဘူး။ တစ်ကောင်က တိုင်ပေးလိုက်သည်။ ခွပ်ခွပ်ခွပ် နှင့် သူများဂျင်လေး ကွဲသွားသည်ကို မေးတစ်ပွတ်ပွတ်နှင့် ကျေနပ်နေကြတာ မြင်မကောင်းပင်။ ခဏကြာတော့ .. ဟေးဝေဖြိုး မင်းက စို့စပတ် လုပ်တတ်တယ်ဆို.. ငါသူများဆီက ကြားတယ်။ ကျွန်တော်က ဆရာကြီးလေသံနှင့် အေး ပြော .. ယောက်ျားလား၊ မိန်းမလား ၊ ရထားလား ဘာလားဆိုပြီး Options တွေ ပေးလိုက်သည်။ ဟိုကောင်က ပေါ်လာသော စိတ်ကုူး dropdownlist ထဲက ၁ခုရွေးပြီး ဖြေလိုက်တယ်၊ မိန်းမ လုပ်ကွာ! (၁မျိုးမထင်ပါနှင့်)။ အဲ့တော့ ကျွန်တော် .. အဟမ်း. ကြိုးကို သေချာရစ်သည်။ စိတ်ထဲကတော့ သွားပြီလို့.. မလုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘဲနှင့်။ လာလေရော့ ဆိုကာ .. ဂီယာထိုးသလို (အမူအရာနှင့်) လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။ အဖြစ်အပျက်က မြန်လွန်းသည်မှာ ဘာမှ မမြင်လိုက်ရ။ ရွှီး .. ၀ှီး .. ခွမ်း .. ခွပ် ..(အတန်ကြာမှ) .... အား .. ဟု အသံနက်ကြီးကြားလိုက်ရသည်။ သွားကြည့်တော့ ဘယာကြော်ကုလား နဖူးလေး ပွတ်ကာ အဓိပ္ဗါယ်ရှိစွာ မှဲ့ပြနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အွမ်.
သူငယ်ချင်းများ အလုပ်ရှုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဖိနပ်တွေ တစ်ပစ်ပစ်၊ ဂေါ်လီတွေ တစ်အိပ်နှင့် ယောက်ယက်ခတ်နေသည်။ ကျွန်တော်က ဟကောင်တွေ မင်းတို့ အဲ့ဒီအရုပ်ပစ်တာ မကစားနှင့်၊ ကျင်းလည်း မစိန်နှင့်။ ငါတို့ ဒိုးဒိုးချင်း ပစ်မယ်။ ဟိုကောင်တွေက ကျွန်တော့်ကိုမြင်ကတည်းက ကျွတ်နေသော်လည်း ဗယာကြော် ၀ယ်ကျွေးထားသော မျက်နှာဖြင့် (ဟိုနေ့က တစ်ဗန်းလုံးဝယ်လိုက်တယ်လေ ။ ငှဲငှဲ ) အေး ... Sure, let's move. ဒိုးလေးတွေ တည်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီနေ့က ရွှံ့ဒိုးလေးနှင့် .. ခွပ် ခွပ် .. သွားပြီ ကွဲသွားပေပြီ။ ရှိတာမှ တစ်လုံးတည်း။ ကျွန်တော် ခဏလေသွားတယ် ပြီးတော့ ပြန်တက်သွားတယ်။ သစ်သားဒိုးတစ်လုံး ယူလာတယ်။ အလုပ်မဖြစ်၊ နောက် . ဖန်တစ်လုံးနှင့် ဆက်ဆော့တယ်။ ထပ်ကွဲတယ်။ နောက်ဆုံး .. အဒေါ်ကို သိမ်ကြီးဈေးကနေ လမ်းကြုံမှာလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အမာဆုံး ဒိုး၁လုံး ၀ယ်ခဲ့ပေးစမ်းပါလို့။ .. မီး၂ခါဖြတ်ခန့် အကြာမှာ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ဟောဒါ စလစ်(ကျောက်စရစ်) ဒိုးတဲ့။ ဟဲဟဲ ပျော်တာပေါ့။ ကျွန်တော် ဟိုကောင်တွေကို ကောင်းကောင်းအနိုင်ကျင့် ပေးလိုက်တယ်။ .. ဒါပေမယ့် ကြာကြာမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဘယ်ကာလ ကတည်းက ကြည့်မရသော လဒတစ်ကောင်က အပေါ်ကို ပြန်တက်သွားသည်။ နောက်တော့ ဒိုးတစ်လုံး ယူပြီးဆင်းလာတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ဂေါက်သီးကြီး ။ .. ဟိုက်ရှားလပတ်ဒိုး ။
(တော်ပြီ .. Visit Myanmar Year)
ကြားထဲမှာ တခြားကာလတွေ ရှိခဲ့၊ ကစားနည်းမျိုးစုံကစားခဲ့သေးတယ်။ တူတူပုန်းတမ်းကစားရင်း မြောင်းထဲ ခြေထောက်တစ်ဖက် ကျွံသွားသဖြင့် မနည်းပြန်နုတ်ယူခဲ့ရသေးတယ်။ ခဏအနားယူပြီးနောက် .. စွန်လွှတ်လေသည်။ အင်မတန် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လှလည်းလှ၊ ပညာလည်းပါ၊ ကျန်းလည်းမာသောအရာပင်။ အလှစွန်၊ ဆီစိမ်စွန်၊ တိုက်စွန်၊ ပလပ်စတစ်စွန်၊ လူ၂လံလောက်ရှိသောစွန် စသဖြင့် သောင်းကျန်းခဲ့ကြသည်။ ရစ်လုံးတွေ ၀ယ်ဥကာ အကောင်းဆုံး မှန်စာကြိုးကို ရှာခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကစားတိုင်းရှုံးနေလို့ နောက်ဆုံး စွန်ကောက်သောဘ၀သာ ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
(ခေတ်စပျက်ခြင်း ... )
ကွန်ပျူတာကို ငါးတန်းလောက်ကတည်းက ကပ်သုံးခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းများကြားထဲမှာ ဆရာပင်။ MICT ကြီးအရမ်း စန်းထသောကာလ ၁ခုတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း သွားရမှာ ပျင်းသဖြင့်၊ ဘော်ဒါ၂ကောင်ကို ခေါ်သွားသည်။ သူတို့ကတော့ ချောဆွဲတာခံလိုက်ရပြီး ပါလာတယ်ဆိုပါစို့။ ဟိုရောက်တော့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို ပြသပြီး .. အားလုံးတပြုံးပြုံးနှင့်။ နောက်တော့ အခန်း၁ခုတွေ့သည် .. ဂိမ်းကစားနိုင်သည်တဲ့။ ကျွန်တော်က အိမ်မှာ ကွန်ပျူတာဂိမ်းကောင်းကောင်းကစားနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လုိုမှမနေ၊ သူတို့က စမ်းကြည့်ချင်သည်တဲ့။ Red Alert ကို ကစားပြလိုက်သည်။ မကြိုက်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီ ကြွက်ဆိုတဲ့အကောင်ကို ကြည့်မရဆိုပဲ။ နောက်တော့ မကြိုက်သာမကြိုက်တာ တနေကုန်သွားသည်။ ပြန်တဲ့လမ်းတွင်တော့ အတွေးကိုယ်စီနှင့်.. ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် စောင့်ကြည့်နေသည်။ ၂ပတ်ကြာတော့ .. ဟေး ငါဂိမ်းဆိုင်၁ခု ဖွင့်တာတွေ့တယ်။ ယောက်လမ်းထဲမှာ .. ထပ်သင်ပေးဦးဟု တစ်ကောင်က လာပြောသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရောက်သွားသည်။ အဲ့ဒီခေတ်က ဘယ်သူမှ မကစားသေးသဖြင့် ဆိုင်တွေက လူခပ်ခြောက်ခြောက်၊ အဲ့လိုနှင့် ..... ဘာဆက်ဖြစ်လဲ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။ ကူးစက်သွားတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ အရင်က လမ်းပေါ်က အချိန်တွေအားလုံး အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်။ သေနတ်ပစ် ဗုံးခွဲရတာက ဂျင်ပေါက်တာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပဲ။ ... ကျူရှင်မရှိဘဲ အချိန်ပိုတွေတက်သည်ဟု ပြောခဲ့ရပေါင်းလည်း မနည်းခဲ့ပေ။ ဆယ်တန်းကို အေးဆေးပါလို့။ ကဂျိုးကဂျောင် လျှောက်မလုပ်ရင် ပြီးတာပဲ အဓိကကလို့ဆိုကာ .. စာမေးပွဲရက်တွင်ပင် တစ်ချို့များသွားကစားဖြစ်ကြသေးသည်။ ဒါလည်း Distinctions တွေနှင့်ပါပဲ။
ဘ၀ကရုတ်ခြည်းပြောင်းသွားသည်။ တနေ့တနေ့ ဖင်အင်မတန်ပူသော ထိုင်ခုံတွေပေါ်တွင်ထိုင်ပြီး မျက်စိအညောင်းခံ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဖိုး အကုန်ခံကာ .. ဖရုသ၀ါစာအပြည့်နှင့် ကစားနေကြသည်။ အချိန်တွေအချိန်တွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကမ္ဘာပေါ်ကအခြားတိုင်းပြည်တွေနှင့်မတူ ပြက္ခဒိန်တစ်မျိုးပြောင်းသုံးနေတဲ့ အထာနှင့် .. ဖြုန်းပစ်လိုက်ခဲ့လေခြင်း။ ပိုက်ဆံတပြားမှ မရှာဘဲ ကစားခဲ့မိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ပြောမိကြတိုင်း မျက်နှာမကောင်းကြ။ မိဘပိုက်ဆံရှိတာ ကိုယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်သည်ကို နားမလည်ခဲ့နုိုင်ကြဘဲ နောင်များပြန်တွေ့တော့ ရုပ်တွေက အကုန်နင်နေသည်။ ပိုက်ဆံ ၁ဒေါ်လာရှာနိုင်လားဟု ကျွန်တော့်ကို အဖေက စိန်ခေါ်သည်။ မင်းအဲ့ဒါကစားတာ လုံးဝ Acceptable, Fine တယ်။ လူပဲ ကစားမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခြူးတစ်ပြားဖြစ်အောင် ရှာနိုင်မလားဆိုတော့ ကျွန်တော်တွန့်သွားခဲ့တယ်။ တော်ရုံတန်ရုံသာ ဆက်ကစားခဲ့ပြီး အပြစ်ရှိသလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဘ၀တစ်ခုလုံးပေးဆပ်ရမဲ့အရာတွေထဲမှာ မပါတာသေချာရင်ဘယ်ဟာမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုက်မယားတာ ကောင်းမယ် ဟိုဆိုကာ ... လျှော့ခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ လုံးဝသေချာတာကတော့ အရင်တုံးက ဂိမ်းကစားနည်းများသည် သမိုင်းစာအုပ်ထဲတွင်သာ ကျန်ခဲ့ပါတော့မည် ဆိုတာပါပဲ။
Posted by Wai Phyo at2:46 AM0comments
တစ်ရက်မှ သုံးနာရီလောက်ပဲ အိပ်ရလို့ စာမရေးနိုင်ခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ တနေ့တနေ့ အက်ဆေးတွေထိုင်ရေးလိုက်၊ အလုပ်သွားလိုက်၊ တခြားပရောဂျက်တွေ မပြတ်သေးလို့ လက်စသတ်လိုက်နှင့် ချာလပတ်ရမ်းသွားလို့ဗျာ။
တနေ့က လာမေးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ချို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေခဲ့တာလေးတွေ ပြန်ရှယ်ချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်အလုပ်မျိုးလုပ်ချင်သလဲတဲ့။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် software engineer အနေနှင့် ကျောင်းမတက်ခင် ယာယီလုပ်နေတယ်ဗျ။ တနေ့တနေ့ .net, c#, sharepoint, workflows, ajax, webservices, server components, css layouts ဘာညာတွေ ပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကြားရတာနှင့် အိပ်ငိုက်ဖို့ ကောင်းလာတယ်ဟုတ်။ ခင်ဗျားတို့တော့ မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ သုံးနှစ်ပြီးသွားတဲ့ကာလမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို သေချာသိလာရလို့လားမသိဘူး၊ ပျင်းလာတယ်ဗျ။ တနေ့တနေ့ အလုပ်မှာ Stored Procs တွေ၊ Application Blocks တွေ ထိုင်ထိုင်ကြည့်ပြီး ညစ်လာတယ်။ VS 08 မပြောနှင့်၊ အနုအရွ အလှလေးတွေပါတဲ့ Expression Blend လည်း မခံစားနိုင်ဘူးဂျာ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး IDE ကို သုံးပေမဲ့လည်း လူက မပျော်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်ပဲ Smart Enough မဖြစ်လို့နေမှာပါ။ အဲ့ဒီ Intellisense features တွေ၊ WPF, WCF အစရှိတဲ့ အရာတွေကို ကျွန်တော့်ခေါင်းသေးသေးနှင့် မမှီတာဖြစ်မှာပါ။ ဆိုပါတော့။
ဒါနှင့် ကျွန်တော်ကဖြေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာက Enterprise Connections တွေ Supply Chains တွေပါလို့။ နောက်အဲ့ဒါမှ မဖြစ်ရင် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် HCI (human computer interaction) ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ နှစ်သွင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ HCI အကြောင်းတော့ နောက်များမှ ပြောကြတာပေ့ါ။ အခု ပထမဟာ အကြောင်းပြောမလို့။
အဲ့ဒါနှင့် ကျွန်တော့်ကို သူကမေးတယ်။ အဲ့ဒီ ... Operation Management တွေက ဘာများ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလဲတဲ့။ မင်းလို ကျွန်ပျူတာသမားက ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပဲ။
ကျွန်တော် ဖြေခဲ့ပုံက -
အခုဆိုရင် ကုမ္ပဏီတွေက အင်မတန် မာကျောလှတဲ့ Vertical Structure တွေကနေ .. flexible ဖြစ်တဲ့ ရေပြင်ညီ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေ linear collaboration တွေကို ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ အဲ့လို ပြောင်းလဲနေတာဟာ အသစ်အဆန်းတော့လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အမေရိကန်မှာ ရောင်းမကုန်ထုတ်ကုန်တွေကြောင့် .. အာရှမားကတ်ကြီး၊ အထူးသဖြင့် ထိုင်ဝမ် ( အဲ့တုံးကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ချစ်ပ်တွေထုတ်တဲ့နေရာ) တော်တော်ခံလိုက်ရတဲ့ ကာလတွေ ပြီးကတည်းက .. supply chain ပြောင်းလဲမှုတွေ .. အိုင်တီကိုအခြေခံတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီကြီးတော်တော်များများလည်း ပေတေပြီးနေခဲ့ကြတယ်။ လုပ်တဲ့ တစ်ချို့ company တွေ၊ ကလည်း .. တခြား ပေါ်လစီပိုင်း .. ကျင့်သုံးတဲ့ စံနှုန်းတွေမှာ ပြောင်းတာတွေပဲ ရှိခဲ့ပြီး နည်းပညာ၊ (အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာသမားတွေ အတွက်) အထောက်အကူတော့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မယူခဲ့ကြဘူးဗျ။ အဲ့ဒီထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဥပမာတွေက dell တို့၊ UPS တို့ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ တော်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အခု အချိန်အခါမှာတော့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စဉ်းစားတာတွေလည်း ပြောင်းလာတာပါတယ်။ အရင်တုံးက ဈေးသက်သာဖို့သက်သက်ပဲ .. အဲ့ဒီ supply chain တွေ၊ suppliers တွေအကြား ထောက်ကူမှုတွေ ဘာတွေ၊ optimize လုပ်ကြတာ။ အခုဆိုရင် Research လုပ်တဲ့နေရာ။ ဈေးကွက် Position လုပ်တဲ့ နေရာမှာတောင် အဲ့ဒီ Collaboration ဆိုတဲ့ စကားလုံးက နေ့နေ့ညည အိပ်မရတော့ဘူး။ တစ်ချိန်တုံးက ပြိုင်ဖက်တွေလည်း အခုဆို ပူးပေါင်းပြီး အသစ်အဆန်းတွေရှာမယ်။ ပြီးရင် .. Customer တွေကို ကောင်းကောင်းရောင်းမယ်။ suppliers တွေနှင့် မြန်မြန်ထက်ထက် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းမယ် ဆိုပြီးကြံစည်လာကြတယ်။
အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့နေရာမှာ အိုင်တီ အွန်လိုင်း စနစ်တွေလည်း တော်တော်ကြီးကို အသုံးဝင်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်အကြား ပိုပြီး မြန်ဆန်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေရဖို့အတွက် အင်တာနက်ကြီးက အသက်ဖြစ်လာတယ်။ Electornic Data Interchange စတဲ့ Enterprise Resource Planning စတဲ့ စနစ်ကြီးတွေ ကို သုံးလာကြတယ်။ မ၀ယ်နိုင်ရင် in-house ကိုယ့်ကိုယ်ရေးသုံးတယ်။ သူတို့လည်း မြင်လာတယ်။ အခုလို စနစ်တွေကို သုံးခြင်းအားဖြင့် ဈေးလည်းပေါပြီး အလုပ်လည်းတွင်တယ်ဆိုတာ။ ၀ယ်သူတွေကလည်း ဈေးသက်သာပြီး အချိန် Save ဖြစ်တာကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေပါ။ အဓိကက ကွန်ယက်အသုံးပြု စနစ်တွေ၊ ဒေတာ flow တွေပေါ်မှာ ပိုပြီးမူတည်လာတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။
ဟို အရင်ခေတ်ကလို project based, share point based ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်ကြီးတွေပဲ ရေးနေတယ်လို့လည်း မျက်လုံးထဲမှာ မမြင်လိုက်ပါနှင့်ဦး။ ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ သုံးတဲ့ ချတ်တင်းဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေ၊ Supplier status ကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ widget လေးတွေ၊ Delivery Status ကိုလှမ်းထောက်လို့ရတဲ့ web services တွေက အစ၊ semantic data search တွေ၊ intelligent အော်တိုငုတ်တုတ် လုပ်သွားမဲ့ macro စနစ်တွေ အကုန်ပါပါတယ်။ အဓိကက Value, တန်ဖိုးတစ်ခု ယူဆောင်ပေးလာနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကို ဒီဖက်ခေတ်ရဲ့ Operation Management, Supply Chain, IT Infrastructure ဘာပဲခေါ်ခေါ် နာမတပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျယ်ပြန့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ INSEAD က ခန့်မှန်းတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုက ဘာပြောသလဲဆိုရင် .. ဒီနှစ်အတွင်းပိုင်းမှာ သုံးခုက သိသိသာသာ တိုးတက်လာမဲ့ Operation စီမံခန့်ခွဲမှုနေရာတွေက ..
၁။ Open source နည်းပညာတွေသုံးတဲ့၊ Standards တွေကို လိုက်နာတဲ့ ဒေတာ စနစ်တွေ. စနစ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ERP, SAP, EDI, CRM စတာတွေ တိုးပွားလာပါမယ်တဲ့။ အခုတောင် SAP က ဆရာကြီးမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ရေးပြီးသုံးနေတာတွေလည်း များလာပြီ။ ဈေးကြီးပေးမတတ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် J2EE ဖြစ်ဖြစ်နှင့် ကောက်ရေးလိုက်ပါတဲ့။
၂။ အချက်က ၀ဗ် နည်းပညာတွေပါ။ ဂူဂယ်က လုပ်တဲ့ Open Social တို့၊ Facebook ရဲ့ API တို့၊ iPhone SDK တို့ကို ကစားစရာ၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် Poke စရာလို့ မမြင်ပါနှင့်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ နည်းပညာဘယ်ဟာမဆို.. အွန်လိုင်းအခြေခံ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုမဆို သင့်မန်နေဂျာတွေရဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေရင်သော်လည်းကောင်း။ ကုမ္ပဏီတန်ဖိုး နာမည် ( Branding ) တက်စေရင်သော်လည်းကောင်း၊ CRM, Marketing, Design စတဲ့ ရှုပ်ပွကွဲထွက်နေတာတွေကို တစ်ခုတည်း တစုတစည်းပေါင်းပြီး အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ integrator တွေ အရေးပါလာပါတယ်တဲ့။ ခင်ဗျားဘာသုံးသုံး GTD, productivity မြင့်တဲ့ဟာတွေသုံးရင် ပြီးတာပါပဲဗျာ။
၃။ ကတော့ ဒီ အီးမားကတ်တွေပါတဲ့။ ဈေးရောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ ebay လို အမေဇုန်လိုဟာတွေ၊ ဘီလ်ပေးတာလေးတွေ အစရှိသဖြင့် e-portal, market တွေများလာမယ်။ အသုံးပြုသူတွေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ဆိုက်လေးတွေ တဟုန်ထိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါတွေကို Highly fragmented, but neatly collaborated service တွေလို့ မြင်ပါတယ်။ ပွလေလေ၊ ပေါ့လေလေ၊ လုပ်ရကိုင်ရလွယ်လေ မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ =)
ဆိုပါတော့ဗျာ ... ဒီတော့ပစ်တွေက ပိုပြီး General လည်းကျတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် ဒါမျိုးနဲ့ပဲ ကိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဥာဏ်လည်းစူးစူးရှရှနှင့် အခန်းအောင်းပြီးလုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေမှာ မထိရောက်တော့ဘူးလို့ ခံစားလာရလို့ပါ။ ပျော်ရာသန်ရာပေါ့နော်။ =P ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကတော့ .. အခု ကွမ်တမ်နှင့်ရူပဗေဒကို အထူးပြုတဲ့လူကပြုနေ၊ quantitative analysis တွေလုပ်မဲ့လူကလုပ်၊ research တွေလုပ်ဖို့ ကြံနှင့် ... ငါစိတ်ညစ်တယ်နော်လို့။ ကျွန်တော် ကတော့ လိုင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို တနေ့လုံးထိုင်ရေးဖို့ မခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျ။ ကော်ဖီနှင့် အသက်ဆက်နေရပြီး ... ဥာဏ်အဲ့လောက်မထက်တော့ဘူး။ ဒေတာတွေအများကြီး၊ လူတွေအများကြီးကို Overall ခြုံကြည့်ပြီး စေ့စပ်တွေးခေါ်တာတွေ၊ ခန့်မှန်းတာတွေ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တာတွေဆိုရင် ရနိုင်သေးတယ်။ အကြံဥာဏ်တွေ၊ စနစ်တွေ ချတာတွေဆိုရင် သင်ယူနိုင်တဲ့ ခွန်အားလေးကျန်သေးတယ်။ Algorithm တွေ ခပ် deep deep, အခန်းအောင်း ကျင့်စဉ်တွေတော့ မနိုင်တော့လို့၊ ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ နောက်ဆုံးဖြေခဲ့တယ်ဗျ။ နောက်ပြီး အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘာဝနှင့် သစ်ဆန်းမှု၊ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့ ကျယ်ပြန့်မှုအ၀န်းအတာ၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို လိုက်ပါဝင်ကစားချင်မှုတွေကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြေကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အချက်တွေပါပဲဗျာ။
ဆရာတို့ရော ဘယ်လိုတွေ စဉ်းစားလေ့ရှိသလဲ။ ဘယ်အချက်တွေက ဒီနေ့အချိန်ထိ မောင်းနှင်ပေးထားသလဲဆိုတာ Comment ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျ။
Posted by Wai Phyo at2:30 AM0comments
Tags:data,goals,ideas,internet,online,operation management,personal,services,supply chain,thinking
Safari 3.1 Update + Performance Boost
Long waited (=P) Safari 3.1 is out. The performance boomedalot. New webkit engine is embedded and thus new CSS3 animations, standards are also supported. Well, I haven't seen any bugs so far. Plus, there are few new features as I found out. I've listed them below. Please takeaglance and don't forget to let me know if they are previously existed items. And bugs too =P I should update my Leopard to see the differences though.
Developer Menu - I think this is new =D Pretty sweet tools inside. But Firebug still works great for me.
Error Console - Where u can see bugs and craps!
Web Inspector - Looks like iTunes? Yes, you can see inner things neatly now!
User agents switcher - It works well. I spoofed as an ie6 and tried MS Update =P
Acid3! - Oh no, only 75. Latest webkit got 90. What happened to this??
Offline DB - What's it for? Was it there before?
Hmm, I think there are few other things, too. But I donno what are the differences other than these. Seriously, Apple should consider publishing proper change log in the future ... grrr ...
Enjoy your fastest browser, please kindly sound off in the comments. =D
Posted by Wai Phyo at11:10 PM0comments
Ajax|RIA|Fun libraries - What do you use?
Update: ExtJS အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ကျွန်တော်တို့ DHTML တွေ ကို အလွန်အကျူးသုံးနေခဲ့ကြတာ ကြာပါပြီ။ မျက်စိပဒသ အလှအပတွေဆိုရပါမယ်။ မြန်မာဘလော့ခ်ဂါတွေ အရမ်းသုံးတဲ့ Peeak-a-boo ဆိုပါစို့ ... ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်က Translated Modalboxes တွေမျိုးပေါ့။
အဲ့ဒီ DHTML ကနေ အခု Ajax ဆိုတာတွေ ပိုနာမည်ကြီးလာတယ်။ ကျွန်တော် စလုံး စရောက်ကာစ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က Ajax, SOAP ဆိုတာကို သိချင်လွန်းလို့ လိုက်မေးရတယ်။ တယ်မလွယ်တဲ့ နည်းပညာပဲ။ အဲ့ဒီ XML objects တွေကို ရှိသမျှ ဘရောက်ဇာတွေ မှာ အရင်လိုက်ဆောက် ပြီးရင် XML, Messages တွေ ခေါ် တယ်ခက်တယ်လို့ လက်ခံခဲ့တယ်။ ခက်တာထက် အလုပ်ရှုပ်သဗျာ။
အဲ့ဒီကောင်တွေနှင့်အပြိုင်နာမည်ကြီးလာတာက Humanized.com ကသုံးတဲ့ MochiKit ပါ။ သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး Music Search Engine (ကျွန်တော်ပေးထားတာ) Songza.com လည်း မိုခီကို သုံးပါတယ်။ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Errors တွေ များနေပါသေးတယ်။
နောက် ကျွန်တော် အသုံးများတာ တစ်ခုက Microsoft ရဲ့ ASP.NET Ajax (Atlas) ပါ။ သူ့ရဲ့ update panel ကို တခြားဘယ်သူမှယှဉ်လို့ မရပါဘူး။ ဘယ်ရမတုံး မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က ရေးတာကိုး။ အဟိ။ သူ့ ASP နှင့်တော့ Server calls တွေကို သက်တောင့်သက်သာ ခေါ်လို့ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Web Services တွေကို လုံးဝ Support ပေးတဲ့ အတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာစရာပါ။ သူက effects တွေ တော့ သိပ်မလှပါဘူး။ (ထုံးစံအတိုင်းပဲလေ)။
တချို့ Yahoo ချစ်တဲ့လူတွေကတော့ YUI က အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ ကျွန်တော်သုံးကြည့်ပေမယ့် သိပ်တော့ ဘ၀င်မကျပါဘူး။ သိပ်ကွာခြားချက်တွေ ရှာမတွေ့လို့ဖြစ်မှာပါ။ JQuery ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ သူလည်းအတော်လေး ကောင်းပါတယ်၊ သူ့ဟာနှင့်သူ။ နောက် Dojo, Backbase တို့လည်း မိုက်ပါတယ်။ Backbase ဆိုရင် Enterprise တွေမှာ အတော်သုံးကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Support ကလည်း ကောင်းပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်တော်တော်တောင် မျက်စိနောက်လာပြီ။ အထက်က ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အရာတွေအားလုံးကို သုံးပြီး web2.0 ဆိုက်တွေရေး၊ အလှအပတွေ၊ အသုံးပြုသူစိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးတာတွေဟာ တနေ့တခြားတို့းပွားလာနေပါတယ်။ DHTML,Ajax ဆိုတဲ့ နာမည်တွေထက် Rich Internet Applications တွေလို့လည်း လှလှပပခေါ်ကြပါတယ်။ အခုဆို အဲ့ဒီ DHTML based RIA တွေထက်၊ Microsoft ရဲ့ Silverlight, Adobe ရဲ့ AIR စတာတွေလည်း သုံးနေကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတော့တယ်။
Ajax သတင်းလေးတွေ ဖတ်ချင်ရင် Miniajax တို့ Ajaxian တို့၊ AjaxRain တို့ကို သွားပြီး လေ့လာစောင့်ကြည့်ကြပါဗျိုး။ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာဝဗ်ဆိုက်တော်တော်များများမှာ အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ သုံးထားတာ တွေ့ဖို မျှော်လင့်နေပါတယ်။
သင်ကော ဘာ Library သုံးသလဲ Comment ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ =)
Forrest Gump ပြောလို့ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ ExtJS အကြောင်းကို ပြန် သတိရသွားတယ်။ လှတယ်သာထင်ရပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ပရောဂျက်မှာသုံးလိုက်တာ မြွေကိုက်သွားလေရဲ့။ Hibernate သုံးပြီး Struts Framework တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့ j2ee site တစ်ခုပါ။ ဒေတာ row ၁ သောင်းကို loading ခေါ်ပြီး Grid Control နှင့် သုံးလိုက်တာ စက်တွေ ဟန်း၊ အကုန်ရွဲကုန်လို့ အတော်ညစ်သွားတယ်တဲ့။ နောက်တော့ တွေ့လိုက်ရတာက ဒေတာတွေများများ သုံးမရဘူးဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ... အင်း တော်တော်တော့ လှတဲ့ဟာပါပဲ။ Webtop တွေတောင် support လုပ်တယ်ဗျာ။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒေတာတွေ handle မလုပ်နိုင်ရင်တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျာ။
Posted by Wai Phyo at6:19 PM0comments
iPhone SDK => Mobile Ogre?
အိုင်ဖုန်း SDK အကြောင်းကို လူတိုင်း ပြောနေကြပါပြီ။ မနေ့က ထွက်တာပါ။ ကျွန်တော် အိုင်ပေါ့တပ်ချပ် တစ်လုံးဝယ်မလို့ဟာတောင် ဒီသတင်းကို စောင့်နေလို့ မ၀ယ်ဖြစ်လိုက်ရဘူး။ အောက်မှာ သတင်းအကျဥ်းကိုဖတ်ရှုပါ။
-1 ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးဖို့အင်မတန် လွယ်ပါတယ်။ Debugger, Simulator တွေ အပြည့်အစုံနှင့် သက်တောင့်သက်သာလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးကို ဖရီးဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
-2 ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးပြီးရင် သင့်ဆော့ဖ်ဝဲကို တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြန့်ချီဖို့ လည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ developer account သာရှိမယ်ဆိုရင် ပရိုဂရမ်ရေး၊ testing လုပ်၊ package လုပ်ပြီးရင် iTunes App Store ကို သာပေးလိုက်ပါ။ သူတို့က သင့်ကိုယ်စား ဖြန့်ဖြူးပေးပါလိမ့်မယ်။
-3 ဆော့ဖ်ဝဲ တွေက ထွက်တဲ့ဟာက ထွက်နေပါပြီ။ EA တို့ Freeverse တို့ က အရင် ရထားတာပါ။ SDK ကြီးကို . .. ဂိမ်းတွေလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ iTunes App Store June 08 မှာ ထွက်ရင် ကျွန်တော်တို့ Application တွေကို အသေအလဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
-4 ပန်းသီးက 70/30 ကော်မရှင်စားပါမယ်။ သင့် application တွေကို ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပါ။ ဖရီးဆိုရင်တော့ မစားပါဘူး။
-5 Enterprise Applications တွေပါတဲ့ အိုင်ဖုန်း ဆော့်ဖ်ဝဲ update 2.0 ထွက်ပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ Exchange Server ကို natively ဆက်သွယ်ပြီး Active Sync protocol တွေဘာတွေ ကောင်းကောင်း support လုပ်ပါမယ်။ Business သမားတွေကတော့ ၀မ်းသာကြမှာပါ။
... သတင်းကတော့ ဒါပါပဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ...
အဲ့ဒီ Developer အကောင့်က အလကားမရပါဘူး။ ဆိုတော့ ဘယ်သူမဆို ၉ ၉ ကျပ်တော့ အရင်ပေးပြီးဝယ်ရပါမယ်။ သင့် အတွက်ပြီးရင် Signature တွေ ဘာညာတွေ ရမှာဖြစ်ပြီး။ Software ကို ဖြန့်ဖြူးလို့ရပါပြီ။ .. အဲ့. ဆော့်ဖ်ဝဲက အလကားတော့ရေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြန့်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ Develoepr Account လိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို ကျောင်းသားတွေအတွက် Heartbreak ပါ။ အလကား ၉ ၉ ကျပ်ပေးရဦးမယ်။ ကိုယ့်ဟာကို Free ရေးပြီး ဖြန့်မှာကိုတောင်။ ဒါကတော့ မမိုက်ပါဘူး။
အံ့သြစရာပါပဲ။ အဲ့ဒီအချက်ကို Developers တွေ က သိပ်လည်း မအော်ကြပါဘူး။ သူတို့ကြည့်ရတာ ရေးရဖို့ပဲ စောင့်နေကြတယ်ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ Distribution Channel ကတော့ အတော်လေး ကောင်းပါတယ်။ ၀င်းဒိုး မိုဘိုင်း ကျရှုံးတာလည်း အဲ့လို Distribution Channel မကောင်းလို့ပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲ ၁ခုရေးပြီးရင် သက်တောင့်သက်သာ သွင်းလို့ သုံးလို့ ရအောင် iTunes က အကုန်လုပ်ပေးပါတယ်။ ၀ယ်ယူတဲ့အနေနှင့် သင်က ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး အသင့်သုံးယုံပါပဲ။ အဆင်ပြေခြင်း ဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ။ ကျွန်တော့် windows mobile ကို တစ်ခါတစ်ခါ ဆော့ဖ်ဝဲသွင်းလိုက်ရင် ရှုပ်ယှက်တွေခတ်၊ ဟန်းရင်ဟန်း မဟန်းရင် စက်ကို restart ချချနေရတာနှင့် စိတ်အရမ်းပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
Black Berry ကလက်ရှိ ပထမပါ။ ကမ္ဘာ့ Smart Phones ဈေးကွက်မှာ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ဆော့ဖ်ဝဲရေးတဲ့လူ 650 လောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ပန်းသီးရဲ့ customer base, ရေးရတာ အဆင်ပြေမှု၊ ရောင်းရတာ၊ ဖြန့်ဖြူးရတာ လွယ်ကူမှု၊ ရေးခြင်တဲ့စိတ် ( အဲ့လို touch screen ပေါ်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲရေးရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ )၊ cool ဖြစ်မှု၊ Hardware က ကောင်းမွန်မှု စတာတွေက ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာတင် ပြောင်းလဲမှုတွေ အတော်လုပ်လိုက်မှာပါ။ Games, Tools, Software တွေ အမျိုးစုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ သုံးလို့မရသေးပါဘူး။ စင်္ကာပူက Starhub နှင့် Singtel တို့က လိုချင်နေတာ တစ်ပိုင်းကို သေနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တော်တော်နှင့်တော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ iTunes Store Singapore အရင်ရှိမှ ဒါတွေအားလုံး ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ စောင့်ပေအုံးတော့ဗျာ။ ...
အဲ့ ဒါနှင့်၊ မြန်မာပြည်က အကိုကြီးအမကြီးများလည်း မပြီးသေးတဲ့ Unicode ကိုက်ပွဲကြီးကနေ ခဏနားပြီး ဒီအိုင်ဖုန်းမှာ ရေးဖို့အတွက်လည်း ထပ်လုပ်ဖို့ နှိုးဆော်ပါရစေ။ unicode standard ကဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ဆရာတို့ရဲ့ ၀ဗ်ဆိုက်တွေမှာ ကြွားလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ ငါ့ ယူနီကုဒ်က iPhone ပေါ်အတွက်လည်း Support လုပ်တယ်ဆိုပြီး ။ =D
ပြီးရင်တော့ လူတွေ တကယ်စောင့်မျှော်နေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော၊ သင်တို့ရဲ့ whatever consortium crap တွေကို လိုက်နာသော ဖွန့်စနစ်ကို လည်း ထုတ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနှင့်ဦး။ ၁ခုဆို ၁ခု သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆိုရင် ရပါပြီ။ ... ကျေးဇူးတင်ပါတီ။
Posted by Wai Phyo at11:50 AM0comments
Podcasts, making u smile.
တနေ့တနေ့ သူများဘလော့ခ်တွေ ဖတ်ပြီး စာရေးလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး ကြုံးဝါးနေရတယ်ဗျာ။ မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ဘ၀ကြီးက တခါတလေ
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ပန်းသီး နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိစ္စတော်တော်များများ အသစ်အသစ်တွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး သတင်းက မက်ခ်ဘွတ်ပရုိုအသစ်ပါပဲ။
touch interface ပါလို့ အိုင်ဖုန်းလို ကစားလို့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ nVidia ရဲ့ ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ် သုံးထားတဲ့အတွက် ဂိမ်းအတွက်လည်း မပူရပါဘူးတဲ့။ ပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံ .. စုသာစု။ :P
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် အိုင်ပေါ့ nano လေး ၁လုံးဝယ်လိုက်လို့ အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော့် ညီအတွက် ၀ယ်ပေးတာ၊ အဟီး သူမလာခင် ကြားထဲက ခဏယူသုံးနေတာ။ =P အဲ့ဒီမှာ movies တွေ ထည့်ဘာလုပ်ညာလုပ်နှင့် ကလိနေတာဗျာ။ နောက် podcast တွေ နားထောင်ဖို့ ဒေါင်းလုပ်တွေလုပ်နှင့်။ သူများတွေ အတွက်တော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်က အိုင်ပေါ့၁လုံးလိုချင်တာ podcast တွေ နားထောင်ဖို့ပဲ။ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အကုန်နားထောင်လို့ရတယ်။ ဘာသာစကား အသစ်တွေလည်း သင်လို့ရတယ်။ ( အဲ့ဒါလည်း ကျွန်တော်လုပ်နေလို့ မအားတာ)။ နောက် ပန်းသီးရဲ့ iTunes U က အသက်ပဲ။ သူ့မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ Course တွေ တော်တော်များများပေးထားတယ်။ အဲ့ဒီ courses တွေ၊ talks တွေကို သက်တောင့်သက်သာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နားထောင်လို့ရတာ အိုင်ပေါ့တွေပဲ ရှိတယ်။ တခြားဟာတွေလည်း ရတယ်လို့ ပြောကြပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Synch ကို သက်တောင့်သက်သာ လုပ်ပေးတာ၊ မလိုတာနှင့် ချက်ခြင်း သင့်စက်ပေါ်ကနေ ဖျက်ပေးလိုက်တာ၊ အဲ့ဒါတွေကတော့ iTunes + iPod နှင့်ပဲရပါမယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ ရိုးရိုးသီချင်းတွေသာ နားထောင်နေပြီး ပျင်းနေတာကို podcasts တွေ ပြောင်းနားထောင်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။ ဟာသတွေလည်း နည်းတာမဟုတ်ဘူး ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် လောလောဆယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့ ဟာသစီးရီးဆိုရင် New York Times' David pogue ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရီဗျူး တွေပါ။ အင်မတန် ဗဟုသုတရပြီး ၁ပုဒ်မှ ငါးမိနစ်လောက်ရှိလုို့ အပျင်းလည်းပြေ အသိဥာဏ်လည်း တိုးပါတယ်။
podcast နည်းပညာက နှစ်ချီနေပါပြီ။ ဘုိုးဘိုးဘွားဘွား နည်းပညာကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သိပ်မသုံးကြလို့ ထပ်လောင်း နှိုးဆော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ =D အင်တာနက်လည်း အဲ့လောက် မြန်မြန် မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာလည်း သုံးဖူးပါတယ်။ အဲ့တော့ အားရင် ဘလော့ရေးနေမဲ့အစား .. အဲ့လေ. ... ချတ်နေမဲ့အစား iTunes ကို ဖွင့် podcasts လေးတွေ နားထောင်ကြပါလို့၊ iPod ရှိစရာလည်း မလိုပါဘူး အားလုံး ဖရီးပါ။ =D
Posted by Wai Phyo at11:47 AM0comments
Tags:advice,apple,blogging,david pogue,ipod nano,itunes,itunes u,podcast
GrandCentral + Blogger - Finally
We have been waiting foralong time since Google acquired GrandCentral. I was wondering what kind of services Google would be offering using that. Now it'safirst step. Integration with Blogger!
That'satremendous service. It would allow your Blog Visitors to call you easily! Talk to them right away, or you can have your voice messages. Does it sound good? For me, yes.
Onlyafew steps you need to enable this service.
#1 Register at Grand Central (using the google invite link available @ BloggerBuzz )
#2 Paste your "Web Call" widget on your sidebar.
#3 Ask your visitors to try clicking on that.
Honestly, I have tried that link at BloggerBuzz; it doesn't work. It still redirects me to Beta-Sign-Up Page. Hope that's mystery be clear in no time. :D
Well, have fun and try it. Let me know the QoS of the calls and latencies, if you have tasted it.
Posted by Wai Phyo at12:59 PM0comments
iMac refreshed | Boring Yahoo deal | Kindle Kindle...